သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့် သွားစေမယ့် ဒူဘိုင်း က သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လ ၀င်​ငွေ - Real Gaming Myanmar
သင့်ကို လုံးဝ အံ့အားသင့် သွားစေမယ့် ဒူဘိုင်း က သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လ ၀င်​ငွေ
By ei zon /2months ago / Knowledge / No Comments
အာရပ် နိုင်ငံတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိထားပြီး ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ် ။ ဘယ်လောက်တောင် ချမ်းသာလဲ ဆိုရင် သူတို့ နိုင်ငံမှာ တောင်းစားတဲ့ သူတောင်းစားတွေရဲ့ တစ်လဝင်​ငွေဟာ နိုင်ငံ အများစုမှာ ပညာရှင် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူတွေရဲ့ တစ်နှစ် ဝင်ငွေ ထက်တောင် များတယ် ဆိုရင် သင် ယုံနိုင်ပါ့မလား .. ?
တောင်းစားတဲ့ သူတွေဟာ ဒူဘိုင်းကို တရားဝင် ခရီးသွား ဗီဇာနဲ့ ဝင်ရောက် လာကြပြီး အချိန် သုံးလ အတွင်းမှာပဲ အကျိုးအမြတ် အများကြီး ရှိနေ ကြပါတယ် ။ တောင်းစားတဲ့ နေရာမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်လ ဝင်ငွေဟာ ဒူဘိုင်း ငွေကြေး ၂၇၀,၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၃,၅၀၀) မြန်မာ ကျပ်ငွေ သိန်းတစ်ထောင် နီးပါး ဝင်ငွေ ရှိနေပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မှာ တစ်နှစ် သိန်းတစ်ထောင် ဝင်တဲ့ ဝန်ထမ်း ရှိရင်တောင် အရမ်းရှားမယ် ထင်ပါတယ် ။
တောင်းစား သူတွေဟာ လူတွေရဲ့ သနားကြင်နာ ၊ ဂရုဏာ သက်မှုတွေ အပေါ် အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဒူဘိုင်း နိုင်ငံသားတွေ အပေါ် လုပ်စားနေတယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ဖော်ပြ မှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး ရဲတွေ အနေနဲ့ ဒါတွေကို ရှင်းလင်းဖို့ ပြောဆို တာတွေရှိခဲ့ ပါတယ် ။
အခု ဆိုရင် အာရပ်နဲ့ အာရှ ဂိုဏ်း အဖွဲ့တွေက နိုင်ငံထဲကို လူတွေ ခေါ်သွင်းလာပြီး တောင်းစား ခိုင်းကာ ပြန်လည် ခေါင်းပုံ ဖြတ်မှုတွေ ရှိနေကြောင်း သတင်း ရင်းမြစ် အချို့က ရေးသား ကြပါတယ် ။
ဒူဘိုင်းမှာ တရားဝင် တောင်းစားခွင့် မရှိပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် လိုက်လံ တောင်းစား နေသူတွေက သာမန် မြင်တွေ့ နေကျ သူတောင်းစားတွေမျိုး မဟုတ်ပဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လို့ ခေါ်ရမယ့် သူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူတို့တွေဟာ တစ်ခါ တောင်းရင် တစ်ဆယ် တစ်ရာမျိုး တောင်းတာ မဟုတ်ပဲ အနည်းဆုံး ဒူဘိုင်းငွေ တစ်ထောင် (ဒေါ်လာ ၂၇၀) လောက်က စတောင်းပါတယ် ၊ သနားပြီး အမှန် တစ်ကယ် ပေးသွားတာတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက် သူတို့တွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ အလုံးရင်းနဲ့ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရဲတွေ အနေနဲ့ သူတောင်းစား နှိမ်နင်းရေးကို လှုပ်ရှားမှု တစ်ခု အသွင် ခပ်စိပ်စိပ် လုပ်ဆောင် လာပြီး ပြီးခဲ့နှစ်က ပထမဆုံး တစ်ရက် ထဲမှာတင် ၆၅ ယောက် ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ခရီးသွား ဗီဇာ သုံးလဖြင့် တရားဝင် ဝင်ရောက် လာသူများ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရသည် ။
Credit – Original Uploader
သငျ့ကို လုံးဝ အံ့အားသငျ့ သှားစမေယျ့ ဒူဘိုငျး က သူတောငျးစားတှရေဲ့ တဈလ ဝငျငှေ
အာရပျ နိုငျငံတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ဒူဘိုငျးနိုငျငံဟာ ခမျြးသာတဲ့ နိုငျငံဖွဈတယျဆိုတာ အားလုံး သိထားပွီး ဖွဈပါ လိမျ့မယျ ။ ဘယျလောကျတောငျ ခမျြးသာလဲ ဆိုရငျ သူတို့ နိုငျငံမှာ တောငျးစားတဲ့ သူတောငျးစားတှရေဲ့ တဈလဝငျငှဟော နိုငျငံ အမြားစုမှာ ပညာရှငျ အဖွဈ လုပျကိုငျနသေူတှရေဲ့ တဈနှဈ ဝငျငှေ ထကျတောငျ မြားတယျ ဆိုရငျ သငျ ယုံနိုငျပါ့မလား .. ?
တောငျးစားတဲ့ သူတှဟော ဒူဘိုငျးကို တရားဝငျ ခရီးသှား ဗီဇာနဲ့ ဝငျရောကျ လာကွပွီး အခြိနျ သုံးလ အတှငျးမှာပဲ အကြိုးအမွတျ အမြားကွီး ရှိနေ ကွပါတယျ ။ တောငျးစားတဲ့ နရောမှာ ပရျောဖကျရှငျနယျ ဖွဈနတေဲ့ သူတောငျးစား တဈယောကျရဲ့ တဈလ ဝငျငှဟော ဒူဘိုငျး ငှကွေေး ၂၇၀,၀၀ (အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၇၃,၅၀၀) မွနျမာ ကပျြငှေ သိနျးတဈထောငျ နီးပါး ဝငျငှေ ရှိနပေါတယျ ။ မွနျမာပွညျမှာ တဈနှဈ သိနျးတဈထောငျ ဝငျတဲ့ ဝနျထမျး ရှိရငျတောငျ အရမျးရှားမယျ ထငျပါတယျ ။
တောငျးစား သူတှဟော လူတှရေဲ့ သနားကွငျနာ ၊ ဂရုဏာ သကျမှုတှေ အပျေါ အခှငျ့ကောငျး ယူပွီး ဒူဘိုငျး နိုငျငံသားတှေ အပျေါ လုပျစားနတေယျလို့ အှနျလိုငျးမှာ ဖျောပွ မှုတှေ ရှိခဲ့ပွီး ရဲတှေ အနနေဲ့ ဒါတှကေို ရှငျးလငျးဖို့ ပွောဆို တာတှေရှိခဲ့ ပါတယျ ။
အခု ဆိုရငျ အာရပျနဲ့ အာရှ ဂိုဏျး အဖှဲ့တှကေ နိုငျငံထဲကို လူတှေ ချေါသှငျးလာပွီး တောငျးစား ခိုငျးကာ ပွနျလညျ ခေါငျးပုံ ဖွတျမှုတှေ ရှိနကွေောငျး သတငျး ရငျးမွဈ အခြို့က ရေးသား ကွပါတယျ ။
ဒူဘိုငျးမှာ တရားဝငျ တောငျးစားခှငျ့ မရှိပါဘူး ၊ ဒါပမေယျ့ လိုကျလံ တောငျးစား နသေူတှကေ သာမနျ မွငျတှနေ့ကြေ သူတောငျးစားတှမြေိုး မဟုတျပဲ ပရျောဖကျရှငျနယျ လို့ ချေါရမယျ့ သူမြိုးတှေ ဖွဈပါတယျ ။
သူတို့တှဟော တဈခါ တောငျးရငျ တဈဆယျ တဈရာမြိုး တောငျးတာ မဟုတျပဲ အနညျးဆုံး ဒူဘိုငျးငှေ တဈထောငျ (ဒျေါလာ ၂၇၀) လောကျက စတောငျးပါတယျ ၊ သနားပွီး အမှနျ တဈကယျ ပေးသှားတာတှေ ရှိနတေဲ့ အတှကျ သူတို့တှရေဲ့ ဝငျငှဟော အလုံးရငျးနဲ့ ဖွဈနတော ဖွဈပါတယျ ။
ရဲတှေ အနနေဲ့ သူတောငျးစား နှိမျနငျးရေးကို လှုပျရှားမှု တဈခု အသှငျ ခပျစိပျစိပျ လုပျဆောငျ လာပွီး ပွီးခဲ့နှဈက ပထမဆုံး တဈရကျ ထဲမှာတငျ ၆၅ ယောကျ ဖမျးဆီး နိုငျခဲ့ပွီး အမြားစုမှာ ခရီးသှား ဗီဇာ သုံးလဖွငျ့ တရားဝငျ ဝငျရောကျ လာသူမြား ဖွဈကွောငျး သိရှိ ရသညျ ။
Previous: ရုပ် လှလွန်းလို့ အိမ်ထဲမှာပဲ လှောင်ပိတ် ခံထားရတဲ့ သက်ရှိ ဘာဘီမလေး
Next: နေပူပူမှာ ရေငတ်လွန်းလို့ ဓာတ်ဆားရည် သောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါတွေကို သတိထားပါ